Ny marina momba ny lesoka fiarovana 1Password | Vaovao IPhone
Androany ianao dia hamaky lahatsoratra momba ny lesoka amin'ny fiarovana matotra ao amin'ny 1Password, iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra misy amin'ny iOS sy OS X ary iray amin'ireo ankafizinay noho ny asa tsara ataon'ireo mpanamboatra azy miaraka amina fanavaozana tsy miova tsy misy vidiny. ho an'ireo mpampiasa azy. mpampiasa. Raha izaho manokana dia ao amin'ilay fampiharana no itokiako hitahiry ny teny miafiko, ny antsipirian'ny banky, ny carte de crédit, sns. efa an-taonany maro izao, ary tena niahy mafy momba ny fampahafantarana ny tenako momba io lesoka fiarovana io aho satria tena liana tamin'io aho. Toy ny mitranga matetika amin'ireto tranga ireto, tototry ny volo sy manangom-bava ny tranonkala (Aza adino fa io no mivarotra indrindra) ka hiezaka aho hanazava ny zava-nitranga sy ny vokatr'izany.
1 Ny olana
2 Ny vahaolana
3 Ny tena halehiben'ny olana
Ny zava-drehetra dia mifototra amin'ny tatitra navoakan'ny injeniera Microsoft, Dale Myers, izay anomezany toky fa 1Password dia mitahiry angon-drakitra tsy voafafa ao amin'ny rafitry ny encryption AgileKeychain. Ireo angona tsy voahidy ireo dia adiresy an-tranonkala amin'ireo pejy izay efa notehirizinay tao anatin'ity serivisy ity sy ny lohatenin'izy ireo, fa tsy ny angon-drakitra fidirantsika mihitsy, izay mijanona ho voahidy feno. Fa maninona no mitazona io data io tsy voahidy? Amin'ny ankapobeny satria ny fanaingoana azy ireo tamin'izany fotoana izany (miresaka momba ny taona 2008 isika) dia niteraka olana teo amin'ny fitaovana sasany rehefa niditra an'io angona io ary niteraka olana tamin'ny fahombiazan'ny bateria.
Hatreto dia afaka mieritreritra ny hoe "Inona ny olana?" Mpampiasa maro no mampiasa 1PasswordAnywhere, fiasa iray izay ampiasain'i Dropbox hitehirizana ny lakilen'ny 1Password anao ary ahafahanao miditra amin'izy ireo avy amin'ny mpitety tranonkala rehetra nefa tsy apetraka ao amin'ilay fitaovana ilay rindrambaiko. Eo indrindra no misy ny olana lehibe: Google dia manondro an'ity atiny ity rehefa voatahiry ao anaty rakitra html, ary misy olona manana fahalalana ilaina afaka miditra amin'ity rakitra ity ary hahafantatra izany data izany raha tsy misy encryption. Manizingizina indray aho fa tsy ny angon-drakitra fidiranao fotsiny, ny adiresy tranonkala sy ny anaran'ny tranonkala izay notehirizinao tao amin'ny 1Password, fa tsy ny fanomezanao antoka.
Ny mpamorona 1Password dia efa namaha ity olana ity tamin'ny 2012 tamin'ny alàlan'ny fomba vaovao fitehirizana ny angon-drakitrao antsoina hoe OPVault. Ity rafitra vaovao ity dia manafina ny angon-drakitra rehetra, ao anatin'izany ireo izay tsy voahidy amin'ny AgileKeychain. Ka inona ny olana? Tsy maintsy nanapa-kevitra izy ireo raha hampiasa ny OPVault ho toy ny rafitra fanoratana tokana, na hanohy hampiasa ny AgileKeychain ho solony. Ary nisafidy an'ity safidy faharoa ity izy ireo.
Maninona no mitazona rafitra tsy dia azo antoka? OPVault dia tsy nametraka olana ho an'ny mpampiasa iOS sy Mac OS X, saingy natao ho an'ny Windows, mpampiasa Android, ary ireo izay nisafidy ny Dropbox ho toy ny rafitry ny fampifanarahana data. Ny kinova taloha 1Password an'ny farany dia tsy mifanaraka amin'ny OPVault, noho izany dia voatery nanapa-kevitra ny amin'izay hatao izy ireo: avelao any aoriana ireo kinova taloha na manohiza manome ny mifanentana amin'ny rehetra. Ary nisafidy an'ity safidy faharoa ity izy ireo, mitazona ny safidy amin'ny fampiasana AgileKeychain.
Ny tena halehiben'ny olana
Ny zava-dehibe indrindra dia ny manizingizina ny angona angonononon'olona mety hahatratra an'io rakitra html io ary hamaky ny angon-drakitrao (izay tsy mora): adiresy tranonkala sy lohatenin'ny tranonkala. Izay ihany. Eny, marina fa tsy misy mila mahalala an'io angon-drakitra io, ary lesoka io no tsy maintsy ahitsy, Tsy ilaina hatahorana ny angon-drakitra fidiranao amin'ireo tranokala na ny nomeraon-kara-trosanao, izay fanamaivanana izany.
Raha vantany vao nanjary mazava izany dia ilaina ihany koa ny manondro hoe iza ireo manana izany olana izany: ireo izay mbola mampiasa AgileKeychain. Ireo mpampiasa efa mampiasa OPVault dia tsy manana olana kely ihany koa. Iza ireo mampiasa OPVault? Ireo izay mampiasa 1Password ho an'ny iOS sy OS X miaraka amina safidy iCloud sync (azo atao toa ahy). Raha izany koa no anao, dia tsy misy olana aminao. Raha mpampiasa 1Password amin'ny Windows ianao, Android na mampiasa Dropbox ho rafitra fampifangaroana dia mila miova amin'ny OPVault ianao ho toy ny rafitra fitehirizana, izay nohazavainao tsara tao amin'ny Bilaogy Agilebits, 1Password developer (amin'ny faran'ny lahatsoratra).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Ny marina momba ny lesoka fiarovana 1Password
Feli dia hoy izy:
Lahatsoratra tsara, Luis, izany no tokony ho fomba henjana amin'ny fanaovan-gazety ary vao mainka aza izany raha resaka filaminana.
Valiny tamin'i Feli